Sorona Masina ny 22/11/2019 - Fihirana Katolika Malagasy
Sorona Masina ny 22/11/2019
Herinandro faha-33 mandavantaona
Jer. 29, 11. 12. 14
Ny hevitro, hoy ny Tompo, dia hevitra hampiadana fa tsy hampahory. Hiantso Ahy ianareo ary hihaino anareo Aho: hampodìko avy any amin’ny tany rehetra ny babo aminareo.
Ho faly manompo Anao mandrakariva anie izahay, ry Tompo Andriamanitra, fa mandrakizay sady feno ny hasambarana omaninao ho anay raha maharitra manompo Anao fototra iavian’ny soa rehetra izahay.
Boky Fanambarana nosoratan’i Md. Joany Apôstôly
Apok. 10, 8-11
Noraisiko ny boky dia nateliko.
Izaho Joany dia nandre feo avy any an-danitra nanao hoe: “Mandehana alao ny boky kely mivelatra eny an-tanan’ilay anjely mitsangana eo ambonin’ny ranomasina sy ny tany.” Dia nankany amin’ilay anjely aho sy nilaza taminy hanome ahy ny boky, ka hoy ny navaliny ahy: “Raiso ka atelemo izy; hangidy izy ao an-kibonao, nefa ho mamy toy ny tantely eo am-bavanao.” Noraisiko ny boky teny an-tanan’itý anjely, dia nateliko avokoa, ka mamy toy ny tantely izy tao am-bavako, fa nony nateliko kosa, dia tsaroako nangidy tao an-kiboko. Tamin’izay dia nisy nilaza tamiko hoe: “Olona maro sy firenena maro sy fiteny samihafa ary mpanjaka maro koa no tsy maintsy mbola haminanianao.”
Salamo 118, 14 sy 24. 72 sy 103. 111 sy 131
Fiv.: Endrey! mamin’ny lanilaniko ny didinao.
Ny lalan’ny fanambarànao no ifaliako, mihoatra noho ny harena rehetra. Ny fanambarànao no firavoako; ny fitsipikao no filàko saina.
Soa ho ahy ny Lalàna avy amin’ny vavanao, mihoatra ny volamena sy volafotsy arivoarivo! Endrey! mamin’ny lanilaniko ny didinao, ary tsara amin’ny vavako manoatra ny tantely!
Ny fanambarànao no lovako, ry Ilay Mandrakizay: Izy no fifalifalian’ny foko! Misokatra ny vavako; miemponempona aho; ny baikonao no mahaliana ahy!
Boky voalohan’i Makabeo
1 Makab. 4, 36-37. 52-59
Nitokanana ny ôtely, ary an-kafaliana no nanaterana ny sorona dorana.
Tamin’izany andro izany, hoy i Jodasa sy ireo rahalahiny: “Efa resy itý ny fahavalontsika, ka ndeha amin’izao hiakatra hanadio ny tempoly sy hitokana azy indray.” Dia nivory ny tafika manontolo, ka niakatra ho any an-tendrombohitra Siôna. Dia nifoha maraina koa izy, tamin’ny andro fahadimy amby roapolon’ny volana fahasivy, izay volana atao hoe Kasleo, tamin’ny taona fahavalo amby efapolo amby zato, ka nanatitra sorona, araka ny lalàna teo ambonin’ny ôtelin-tsorona dorana vaovao izay narafiny.
Tamin’ny volana sy ny andro nandotoan’ny firenena ny ôtely indrindra no nanamasinana azy indray, tamin’ny hiran’ny salamo, sy tamin’ny feon’ny harpa aman-dokanga sy kipantsona. Indray nihohoka ny vahoaka dia nitsaoka sy niandrandra ny lanitra, nisaotra an’Ilay nanambina azy. Naharitra valo andro no nanaovany ny fitokanana ny ôtely, ary an-kafaliana no nanaterany ny sorona dorana sy ny sorom-pisaorana amam-piderana. Noravahany fehiloha aman’ampinga be renty ny anoloan’ny tempoly, namboariny koa ny fidirana amin’ny tempoly sy ny efi-trano sady nasiany varavarana. Nisy fifaliana lehibe indrindra teo amin’ny vahoaka ka afaka ny fahafaham-baraka nafitsoky ny firenena. Ary i Jodasa nifanara-kevitra tamin’ireo rahalahiny mbamin’ny fiangonan’i Israely rehetra, dia nandidy ny hankalazana ireo andro nitokanana ny ôtely, amim-pifaliana sy firavoravoana mandritra ny havaloana isan-taona miantomboka amin’ny fahadimy amby roapolon’ny volana Kasleo.
Salamo: 1 Tant. 29, 10-11a. 11bde. 12
Fiv.: Midera ny Anaranao be voninahitra izahay, ry Tompo.
Isaorana ianao, ry Tompo Andriamanitr’i Israely Razanay: hatramin’ny mandrakizay ka ho mandrakizay! Anao, ry Tompo, ny halehibiazana sy hery, sy hamirapiratana, fahamendrehana sy fiandrianana.
Anao ny zava-drehetra: na ny any an-danitra na ny eto an-tany! Anao, ry Tompo, ny fanjakana, sy ny fisandratana ho lohan’ny zava-drehetra!
Ny harena, ny voninahitra dia avy aminao! Ianao no mifehy ny zava-drehetra! An-tananao ny hery sy ny tanjaka! Ny tananao no mahalehibe sy mahamafy ny rehetra!
Ankalazao ny Tompo, ry Jerosalema. Izy Ilay mandefa ny didiny eto an-tany.
Evanjely Masina nosoratan’i Md. Lioka
Lk. 19, 45-48
Ataonareo zohin’ny mpangalatra ny tranon’Andriamanitra.
Tamin’izany andro izany, niditra tao an-tempoly i Jesoa, dia nandroaka ny mpivarotra sy ny mpividy tao, ka nanao taminy hoe: “Efa voasoratra, fa ny tranoko dia trano fivavahana, nefa ianareo kosa nanao azy ho zohin’ny mpangalatra.” Dia nampianatra isan’andro tao an-tempoly Izy; fa ny lehiben’ny mpisorona sy ny mpanora-dalàna ary ny loholona kosa nitady hahafaty Azy; nefa tsy hitan’izy ireo izay hevitra hoenti-manao izany, satria faly sy ravo nihaino Azy ny vahoaka rehetra.
Mihanta aminao izahay, ry Tompo: enga anie izao Sorona atolotray eo anatrehanao avo indrindra izao hahafahanay miraiki-po aminao ary hahatongavanay any amin’ny fiainana mandrakizay.
Sal. 72, 28
Ny ahy ny hasambarako dia eo anilan’Andriamanitra. Ny Tompo no ataoko fifefena.
Mk. 11, 23. 24
Lazaiko marina aminareo, hoy ny Tompo, fa na inona na inona angatahinareo amin’ny fivavahana, minoa fa ho azonareo izany, dia ho tanteraka tokoa.
Nandray ny fanomezana avy amin’ny Sorona masina izahay, ry Tompo, no mihanta aminao: enga anie ny Sorona nasain’ny Zanakao atao ho fahatsiarovana Azy hampitombo ny fitiavanay Anao.
Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.0286 s.] - Hanohana anay